Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Nndzi Borɔnya? | FAQ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Australia Mmum Kasa Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Colombia Mmum Kasa Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungary Mmum Kasa Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Mmum Kasa Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Philippines Mmum Kasa Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tamil Tankarana Tarascan Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Akɔhwisɛm: Siantsir a Jehovah Adasefo nndzi Borɔnya nye dɛ wɔnngye Jesus nndzi.
Nokwasɛm: Yɛyɛ Christianfo. Yɛgye dzi dɛ yɛnam Jesus Christ nkotoo do na yebenya nkwagye.​—Ndwuma 4:12.
Akɔhwisɛm: Hom kã kyerɛ ebusuamufo dɛ mma wonndzi Borɔnya dze tsetsew mbusua ntamu.
Nokwasɛm: Yɛdwen mbusua ho paa, na yɛnam Bible no do boa ma mbusua ahorow gyina na wɔyɛ dzen.
Akɔhwisɛm: Hom nnya “Borɔnya sunsum” a ɔnye ayamuyie, asomdwee wɔ asaase do, nye tsinkwa a wɔdze ma nyimpa no mu kyɛfã.
Nokwasɛm: Yɛbɔ mbɔdzen dɛ yɛbɛda ayamuyie nye asomdwee edzi dabiara da. (Mbɛbusɛm 11:25; Romefo 12:18) Dɛ nhwɛdo no, ɔkwan a yɛfa do yɛ hɛn nhyiamu ahorow nye asɛnka edwuma no nye Jesus ahyɛdze yi hyia: “hom enya no kwa: hom mfa mma kwa.” (Matthew 10:8) Bio so yɛdan adwen kɔ Nyankopɔn n’Ahenman no do dɛ, ɔno nkotsẽe nye asomdwee a yebenya wɔ asaase yi do ho nokwar enyidado.​—Matthew 10:7.
Jesus hyɛɛ hɛn dɛ yɛnkaa no wu no, na nnyɛ n’awo no.​—Luke 22:19, 20.
Jesus n’asomafo nye n’esuafo a wodzi kan no enndzi Borɔnya. New Catholic Encyclopedia no kã dɛ “wɔdze Jesus n’awoda ho afahyɛ no sii hɔ bɛyɛ afe 243 wɔ Christ no wu ekyir.” Iyi kyerɛ dɛ asomafo no nyinara wui no ekyir no, bɔbor mfe ɔha twaa mu ana wɔdze Borɔnya no risi hɔ.
Adanse biara nnyi hɔ a ɔkyerɛ dɛ wɔwoo Jesus December 25; wɔnnkyerɛɛw n’awoda no wɔ Bible no mu.
Yɛgye dzi dɛ Nyankopɔn nngye Borɔnya nnto mu osiandɛ n’ase fi abosonsom amandze ahorow mu.​—2 Corinthfo 6:17.
Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ hom ma Borɔnyadzi yɛ asɛm?
Nyimpa pii nyim dɛ Borɔnya fi abosonsom mu na Bible no mmfoa do dze, naaso ne nyinara ekyir no wodzi Borɔnya. Dɛm nkorɔfo yi botum ebisa dɛ: Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ Christianfo dze gyinaesi a ɔtse dɛm haw hɔnho? Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ wɔma iyi so yɛ asɛm?
Bible no hyɛ hɛn nkuran dɛ hɛnankasa yensusũ nsɛm ho, na hɛn som no aayɛ “som a ɔwɔ siantsir.” (Romefo 12:1, 2) Ɔkyerɛkyerɛ hɛn dɛ yɛmma nokwar no nsom hɛn bo. (John 4:23, 24) Ntsi ɔwɔ mu dɛ yɛdwen mbrɛ afofor bu hɛn no ho dze, naaso yɛdze Bible ngyinadosɛm yɛ edwuma, sɛ iyi ntsi nkorɔfo renngye hɛn nnto mu mpo a.
Ɔwɔ mu dɛ hɛn dze yesi gyinae dɛ yennkedzi Borɔnya dze, naaso yɛkyerɛ obu ma hokwan a obiara wɔ dɛ nankasa si asɛm yi ho gyinae no. Sɛ afofor ridzi Borɔnya a, yenntwitwa hɔn akwan mu.
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Nndzi Borɔnya?